Tuesday, 04.07.2020, 04:26pm (GMT+5.5) Home Contact
विदेशिनेमा महिला बढी !
Tuesday, 05.08.2018, 11:04am
काठमाडौं । नेपालमा रोजगारीको अभावमा दैनिक एक हजार पाँच सय युवा विदेशिन्छन् । उनीहरुले श्रम गरेर पठाएको रकमबाट मुलुकको आयात धानिएको छ । नेपाली युवायुवतीहरुको विदेश यात्रा रहर नभएर बाध्यता हो । यतिबेला युवाको तुलनामा युवतीहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । विगत केही वर्षयता नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरूषको संख्यामा तीव्र रूपमा कमी आएको छ भने महिलाको संख्यामा वृद्धि भएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।
आयो कृषि मन्त्रीको प्रतिबद्धता : कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भरतादेखि निर्यातसम्म
Tuesday, 05.08.2018, 10:56am
काठमाडौं । अधिकांश जनता कृषिमा निर्भर तर खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ । खेतबारी बाँझै राखेर युवा विदेशिने गरेका छन् । यस्तोमा युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने गरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा विस्तारसहित कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर गराउने मार्गचित्र अगाडि ल्याएको छ ।
१० खर्बको व्यवसाय शून्य राजश्व
Tuesday, 04.24.2018, 01:22pm
काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक यातायातमा चलेको सिण्डिकेटले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भैरहेको छ । यो क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ भने यसबाट प्राप्त हुने राजश्व शून्यको हाराहारीमा छ । गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर चलेको यातायात व्यवसायी समितिहरुको बलियो जालो तोड्न पटकपटकको प्रयास र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत पालना हुन नसक्दा यो क्षेत्रमा मनोमानी चलिरहेको थियो । अहिले सरकारले सिण्डिकेट तोड्ने लक्ष्यका साथ अभियान चलाएको छ ।
Tuesday, 04.24.2018, 01:13pm
Thursday, 04.12.2018, 11:28am
Thursday, 04.12.2018, 11:14am
यसरी देश समृद्ध बन्दैन
Tuesday, 04.03.2018, 01:47pm
काठमाडौं । नेपालमा शान्ति छ, स्थिरता कायम हुँदैछ भन्दै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने काम निकै पहिलेदेखि हुँदैआएको छ । केही वर्ष अघिसम्म बाह्य लगानीको सम्भावना कम थियो । तर, केही वर्षयता मुलुकमा स्थिरताको संकेत देखिए पनि लगानी प्रतिबद्धता आउने तर भित्रिन सकेको छैन ।
नेपालमा लगानीको सम्भावना प्रशस्तै छ । जलस्रोत, खानीजन्य उद्योग, जडिबुटी लगायतका क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि यसमा पर्याप्त लगानी छैन ।
अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या : समाधानका लागि अपिल
Tuesday, 04.03.2018, 01:33pm
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै यसको समाधानका लागि सबैसंग सहयोगको अपिल गरेको छ । सरकारले लामो समयदेखि थिग्रिएर रहेका अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको समाधान कुनै एक पक्षको पहलबाटमात्र नहुने भन्दै सहयोगको अपिल गरेको हो ।
Tuesday, 03.27.2018, 12:19pm
Tuesday, 03.20.2018, 11:04am
कहाँ खर्च भो डेढ खर्ब रुपैयाँ
Tuesday, 03.06.2018, 02:45pm
काठमाडौं । नेपालमा विदेशी दातृ राष्ट्र, निकाय तरा आइएनजिओहरुको बोलवाला छ । उनीहरुले नेपालका अनेक क्षेत्र, समुदाय र विकासका विविध पक्षमा सघाउने भन्दै वार्षिक रुपमा अथाह धनराशी खर्च गरिरहेका छन् । तर, त्यो रकमको उपलब्धि कहाँ कसले कसरी पायो भन्ने खोजेर पनि भेटिंदैन ।
चिनीया रेल र फास्ट ट्रयाकको सम्भावना
Tuesday, 02.20.2018, 11:00am
काठमाडौं । नेपालसम्म रेल ल्याउने चर्चा र सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको सुरसार छैन । भारतको नाकाबन्दीपछि कागजी रुपमा द्रुतगतिमा अघि बढेको चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म र काठमाडौंदेखि पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको काम भने अघि बढेको छैन । अब त्यो सम्झौता गर्ने पात्र नै पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि रलको काम अघि बढ्ने अपेक्षा बढेको छ ।
Tuesday, 02.20.2018, 10:47am
Tuesday, 01.30.2018, 02:44pm
केही वर्षअघिसम्म नेपाल रक्तचन्द तस्करीको ट्रान्जिट जस्तै बनेको थियो । भारत हुँदै नेपालबाट चीनतिर तस्करी हुने बहुचर्चित रक्तचन्दनको नाम आजकल सुन्न छाडिएको छ र प्रश्न उठेको छ के रक्तचन्दनको तस्करी बन्द भएको हो ? काठमाडौंबाट सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाहुँदै चीनतिर रक्तचन्दन पठाइन्थ्यो । केही मात्रामा रसुवागढीबाट पनि । अहिले यसको कुनै चर्चा छैन ।
Thursday, 01.25.2018, 12:36pm
नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायता तथा अनुदान नेपालको आवश्यता अनुसार र सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र नभएर उनीहरुकै रुची अनुसार भैरहेको छ । हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ अनुदान तथा सहयोग आउँछ तर ती सबै उनीहरुले आफूखुसी परिचालन गर्ने गरी । भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि पनि यस्तै अवस्था आयो । दाताहरुको निर्देशन अनुसार कार्यविधि बन्यो परिणाम अहिलेसम्म घरबारविहीनहरुले घर बनाउन सकेका छैनन् ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणको दुई ढाँचा, गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा
Thursday, 01.25.2018, 12:30pm
काठमाडौं । नेपालको आर्थिक–विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकाा दुई फरक ढाँचा (मोडल) प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो ।
Thursday, 01.25.2018, 12:29pm
Tuesday, 01.09.2018, 01:21pm
काठमाडौं । नेपालमा स्रोत छ तर लगानी गर्न सकिंदैन भन्दै भारतलाई नदी सुम्पने जालझेल अहिले पनि चलिरहेको छ । जब माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना नेपाल आफैंले बनाउने भनेर अघि सारियो तब केही मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र आफूलाई विश्वको अर्थतन्त्रको ज्ञाता मान्नेहरूले यसको बिरोध गरे ।
Tuesday, 01.09.2018, 01:15pm
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समन्वय नहुँदा समस्यामा
Tuesday, 01.09.2018, 01:12pm
सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय गौरवमा राखेका २१ वटा ठूला आयोजनामध्ये चार वटाको मात्रै कार्यप्रगति राम्रो रहेको पाइएको छ । बाँकी आयोजनाको कार्यप्रगति कछुवाको गतिमा रहेको पाइएको छ । सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा स्थानीय स्तरमा रहेका सानातिना समस्याका कारण पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति समग्रमा राम्रो हुन नसकेको हो ।
» बाइस वर्षपछि विद्युत माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने
» बल्ल एक वस्तुमा आत्मनिर्भर
» पाँच महिनामा थपियो ४० मेगावाट बिजुली
» अकबरे खोर्सानीको भाउ घटेपछि किसान चिन्तित
» संघीय संरचनालाई आठ खर्ब २० अर्व रुपैयाँ
» आर्थिक समृद्धिका लागि मतदान
» रेमिट्यान्सले उत्पादन घटायो परनिर्भरता बढायो
» बूढीगण्डकी चुनावी नारा नबनोस्
» यसरी सम्भव हुन सक्छ स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना
» व्यापार घाटा दश खर्ब नाघ्ने
» बुढी गण्डकी अन्योलमा, पश्चिमसेतीको भने ढोका खुल्यो
» केरुङबाट लुम्बिनीसम्म रेल कुदाउन सम्भव
» अनुदान लिन नयाँ नियम
» पाँच वर्षमा दुई हजार किमी रेलमार्ग !
» आयल निगममा गोपालको गोलमाल
» जिएमआर आयोजना मात्र ओगट्दै
» मुआब्जा वितरण नभएकामा प्रभावितको आपत्ति
» एक महिनाको व्यापार घाट ७९ अर्ब
» सिमेन्टमा चिनियाँ कम्पनीले ३६ अर्ब लगानी गर्ने
» ९३ प्रतिशत रकम उपभोग्यमा खर्च
Page 3/10: « 1234567 ... :: »